Ala Mkpa mmanu mmanu - mmanu ndi mere mmanu mmanu | AromaEasy
Ihe na April 28, 2020 Nwere ike 30, 2020 by Matt
Uche anyị na anagide ọtụtụ ihe, anyị na-enyocha uru na ọghọm, na-echegbu onwe maka ohere ị ga-enwe n’ọdịnihu, na-echekwa ihe echefu echefu, ma ọ bụ na-eche banyere ma ọ bụrụ na m gaara esi dị iche na ihe ọzọ. O nwekwara mgbanwe ndi n’emeghi ndu na ndu anyi dika igbanwe oru ma obu iga ebe ozo.
Uche ndị a na mgbanwe ndị ahụ na-eme ka anyị nwewe obi erughị ala na enweghị ntụkwasị obi na ndụ anyị. Mgbe ị na -agabiga nke a, anyị kwesịrị ịbanye n'ala, zuo ike, debe udo nke ime, ma weghachite onwe anyị n'ụwa.
E nwere ọtụtụ ụzọ isi nweta ala. N'ikwu nke ahụ, achọrọ m ịkekọrịta mmanụ dị mkpa na nchịkọta m.
Mmanụ dị mkpa ma dị ike maka ala
Ọ bụ ihe mgbakwasị ụkwụ na ọ na-enyekwa aka n'ezie mgbe ị na-achọkarị ịkọ gị.
Gbalịa Patchouli mgbe ị ka nọ ndụ na nrọ, na-agọnahụ ma ọ bụ jụ ụwa n'ezie.
Endingchụpụtakwu oge na-eche echiche n'ụwa ga-eme ka echiche nke enweghị ntụkwasị obi dịkwuo elu.
Mgbe okwesiri ịlaghachi na ala a na-ahụkarị, ísì ọjọọ a agaghị eme ka ị daa.
Mmanụ a nwere isi ísì, ọ na-esite na mkpọrọgwụ osisi. O bu ihe di ezigbo nkiti ma jikwa mmanu di nkpa. Ọ na-enyere anyị aka ịtụgharị na idozigharị, na belata esemokwu site na uche anyị,
Mmanụ ísì ụtọ nke cedarwood dị mkpa mmanụ bụ kinda pụrụ iche, nke bụ ọkacha mmasị m. Isi ísì ya na-atọ ụtọ na-enyere aka mee ka uche anyị ghara ịdị na-arụ ọrụ, ọ na-emekwa ka anyị nọgide na-elekwasị anya. Mmanụ a dịkwa mma ime ka ọ dị mma, ime ka nguzozi na ime ala. Nwere onwe gị ịnwe ịnwale ya mgbe ọtụtụ echiche na-abata n'uche gị ma ị nweghị ike iwepụ ha
Dị ka mmanụ ime mmụọ nke ukwuu, mmanụ sandalwood dị mkpa na-agbagha ma na-edozi ya. O bara oke uru na ntughari uche site na inyere ndi mmadu aka iwepu uche, nwekwuo uche, ma zue ala.
N'ọnọdụ ụfọdụ, anyị nwere ike ghara ịkọ nkọ.
Mgbe obula anyi choro inabata uzo uche, sandalwood na enyere aka ebe a.
N'inwe ude dị ka mmanụ a honeyụ, dị ezigbo mma iji ya mee ihe ihe dị mkpa mmanụ disọrọ. Mpempe dị nro nke Frankincense mere ka ọtụtụ esemokwu dị m n’obi mgbe enwere m nchegbu banyere ọdịnihu.
Mgbe ọ bụla ọ dị m mkpa ị nweta udo na azụ, aga m etinye Frankincense na ngwakọta m.
Ọ na-amasị m isi ya na-esi ísì ụtọ - ọ na-agbanye ume iji wepụ uche ọrụ ahụ.
Mmanụ a bụ n'ezie ihe kachasị mma mgbe ịchọrọ icheta ma ọ bụ ijide n'oge gara aga, nke ị na-enweghị ike ịgbanwe. Iffgbasa Cypress na-enyere anyị aka n'ụzọ mmetụta uche na n'ụzọ mmetụta uche, ịhapụ nke gara aga, ma gaa n'ihu njem ndụ anyị.
Mmanụ a sitere na mgbọrọgwụ nke osisi, ọ na-ewusi ya ike. M unearth ya dị ka a nnọọ aka mmanụ mgbe araparawo a obi abụọ. Jinja na-enyere m aka nke ukwuu n'iweghachi ikike dị n'ime ma na-enwe mmetụta nke ala. Mgbe m na-atụ egwu ịme mkpebi ma ọ bụ enweghị ike inwe obi ike ime ihe, ana m eji ya ụfọdụ na aromatherapy.
Mara: Ọtụtụ ndị na-akpọ ginger dị ka pungent oil.
Fgbanye mmanụ ndị a dị mkpa oge niile nwere ike inyere gị ezigbo aka ma ọ bụrụ na ọ na-adị gị ka enweghị okirikiri mgbe ụfọdụ. Cannwekwara ike ime nke a mgbe ị na-enwe mgbanwe ndụ gị nke ga - eme ka ị kwụsị inwe nchekwa na ntụkwasị obi nke ime. Ọzọkwa, ị nwere ike ịgbakwunye ndị a grounding mkpa mmanụ gị ude mmiri, ime ka ngwakọta n'ezie adaba n'ihi Nde.
Olee otú ịkụ mmanụ dị mkpa si arụ ọrụ?
Oilkpata mmanụ dị oke mkpa ga-enyere ndị ike gwụrụ ma ọ bụdị ndị nwere mbibi aka. Ọ na - enyere aka ịkwado mmetụta uche ma na - enyere anyị aka ịnagide ihe isi ike na - eche ihu.
N'ụfọdụ mgbe anyị nwere nsogbu nke anyị enweghị etu anyị ga-esi nagide ya, anyị nwere ike ịpụ ma wagharịa n'ime ụwa. Gnweta mmanụ dị mkpa ga-enyere anyị aka ịlaghachi n'eziokwu, ime mkpebi, wee gaa n'ihu.
Kedu mmanụ m nwere ike ịhọrọ maka ngwakọta nsị ahụ?
Eucalyptus mkpa mmanụ pụrụ inye aka mee ka e nwee nchebe pụọ na ike ọgwụgwụ. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike, nkụda mmụọ, na ọbụna ịtụ anyị mkpọrọ, Eucalyptus nwere ike inyere anyị aka iweghachi obi ike anyị. Eucalyptus nwere mmetụta na sistem iku ume. O nwere ike inyere ndị mmadụ aka iku ume dị ukwuu site na ịkwalite iku ume.
Mgbe anyị na-enweghị uche okike na obi ụtọ na ndụ anyị, na-anyụpụta echiche anyị na -akpali echiche anyị, mmanụ oroma dị ụtọ na-ewelite ume anyị ma na-akwalite ọnọdụ nchekwube.
Mgbe ọ bụla ọ dị gị ka ọ dị gị ka ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị kewapụ gị iche, ma ọ bụ na-agbaso ọchịchọ nke ndị ọzọ n'ihi mmekọrịta na-agakọ osisi tii dị mkpa mmanụ ga - enyere gị aka ịmepụta mpaghara gị.
Ọ bara uru nke ukwuu inyere ndị nwere ume iku ume aka ka ọ na-eweghachi ume nke sistem iku ume anyị.
Otutu mmanu siri, dika nke ekwesiri, di ike. N'ihi ya, imepụta ngwakọta na mmanụ ụgbọelu ga-abụ ụzọ dị irè iji mee ka ha nwee ohere karị na sistemụ ụlọ ọrụ anyị.
Usoro limbic bụ kpọmkwem ebe ụbụrụ anyị na-arụ ọrụ mmetụta na mmetụta. N'ihi eziokwu na-esi isi na-arụ ọrụ kachasị na sistemụ limbic anyị, iji arụ ọrụ ọkacha mmasị gị dị mkpa iji rụọ ọrụ.
Nhọrọ a abụghị ndepụta zuru oke. Soro mmuo gi ma o buru na mmanu aburu ososo ebe a, tinye ya.